Warbixin: Xiisadda Galmudug iyo jawaabta xukuumadda
Wararka ka imanaya magaalada Cadaado ee fadhiisinka u ah maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi inay sheegeen inay xilka ka qaadeen Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Xildhibaannadan oo ku shiray hotel ku yaalla magaaladan ayaa ku dooday in Madaxweynuhu sharciga ku tuntay, waxayna tilmaameen inay ahaayeen 55 Mudane, halkaas oo 52 ka mid ahi ay ogolaadeen xil ka qaadista.
Xildhibaannadan ayaa sheegay inay sidoo kale mooshin xil ka qaadis ah ka keeneen Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Baarlamaanka Galmudug.
Xildhibaanada Sheegay inay Xilka ka Qaadeen Madaxweyne Xaaf
Isla xalay waxaa magaalada Cadaado ka qabsoomay kulan kale oo ay yeesheen xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, waxay ku dedafeeyeen oo waxba kama jiraan ku tilmaameen go'aankii ay soo saareen xildhibaannada ka horreeyey.
Xildhibaan Xareed Cali Xareed oo ah Guddoomiye ku Xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Galmudug ayaa VOA u sheegay in kulanka uu xalay guddoomiyey ay ka qaybgaleen 48 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug.
Guddoomiye ku Xigeenka Koowaad Xildhibaan Xareed ayaa sheegay inuu gacanta ku hayo mooshin laga keenay Guddoomiyaha Golaha, isaga oo sheegay inay si dhakhso ah dooddiisa u gudo geli doonaan.
Guddoomiye Xareed ayaa eedaymo kulul u jeediyey dawladda Federaalka ah oo ku tilmaamay inay burburinayso maamul goboleedada, oo dhismahooda loosoo maray jid aad u adag. wuxuuna ugu baaqay inay arrintaas ka laabtaan.
Waraysiga Guddoomiye ku Xigeenka Baarlamaanka Galmudug
DAWLADDA FEDERAALKA AH:
Warsaxaafadeed ka soo baxay Xukuumadda dhexe ee Federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu taageeray go’aanka ay gaadheen xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, waxayna xukuumadda dhexe ku baaqday in la ixtiraamo sharciga.
Warsaxaafadeedka ayaa ugu horrayn lagu sheegay in Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya inay ka walaacsan tahay Xasaradaha Amni iyo kuwa siyaasadeed ee maalmahan ka soo cusboonaaday Xarunta KMG ee CADAADO ee fadhiisinka u ah maamulka Galmudug.
Qoraalka ayaa lagu cambaareeyey, xayiraadda la saaray Madaxweyne ku Xigeenka Galmudug, Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo weliba ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka, waxaana lagu baaqay in xorriyaddooda si degdeg ah loogu soo celiyo.
Qodobka saddexaad ee warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay "Dawladda Federaalku waxey ku baaqeysaa in la ixtiraamo go’aankii uu Baarlamaanka GalMudug gaaray maanta oo taariikhdu tahay 26 September 2017, loona hoggaansamo sareynta sharciga." Ayaa lagu yidhi Qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Ugu dambayn waxaa qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha lagu sheegay in Dawladda Federaalka ahi ay Farayso hay’adaha Amniga inay ka hortagaan xasarad kasta oo keeni arta amni darro saamaysa hay’adaha Dastuuriga ah, waxaana loogu baaqay shacabku inay kaalin ka qaataan dhawrista nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka.